Home » Vaovao momba ny dia an-kolontsaina » Nanafika an'i Wynwood i Curaçao nialoha an'i Art Basel
Fantatra amin'ny endrika ivelany mamiratra sy maroloko ny nosy Karaiba ao Curaçao dia manaparitaka pejy iray avy amin'ny bokin-dalao ary manao famafazana any Miami miaraka amin'ny sary hosodoko lehibe kokoa noho ny fiainana ao am-pon'ny Wynwood. Nahazo aingam-panahy avy amin'ny zavakanto an-dalambe eklektika izay nipoitra tao anatin'ny roa taona lasa tao amin'ny renivohitry Willemstad, firenena, Curaçao Tourist Board (CTB) nangataka ny fanampian'ny Curaçaoan mpamorona sy eo an-toerana, Sander Van Beusekom, handrafitra sy handoko sombin-javatra tany am-boalohany izay haseho ao Wynwood amin'ny fiandrasana ny Art Basel 2019.
Ny ati-dohan'i Van Beusekom sy ny ekipan'ny CTB, ny rindrina 40 'x 18' avy any Northwest 24th Street dia lalaovina tamin'ny fampielezana marika manerana ny nosy. Ny loko marevaka - kaleidoscope mavo mavo, lanitra manga, tangerine, indigo ary fuschia - dia misintona mivantana amin'ny hatsaran'ny fomban'ny CTB, raha ny sary kosa dia ny tsara indrindra azon'i Curaçao hatrizay, manomboka amin'ireo mponina ao aminy izay tia azy ka hatramin'ny fiainany an-dranomasina marefo. Ilay sombin-tantara, mitondra ny lohateny hoe "Tickle Me Curaçao," dia manasongadina vehivavy curaçaoan be fitiavana sy mahafinaritra, manintona ny ao ambanin'ny parrotfish, zavaboary miloko avana izay mipetraka ao amin'ireo toerana antsitrika 65+ nosy. Na izany aza, ny fijerena akaiky kokoa dia mampiharihary lafika iray mampatsiahy ireo tranobe manan-tantara malaza an'i Curaçao sy ny Bridge Juliana Queen, tetezana avo indrindra any Karaiba. Ny lokon'ny manga ao ambadiky ny rahona sy ny vola azon'ny vehivavy miorina amin'ny kintana dia mitodika bebe kokoa amin'ny Nosy ABC sy ny sainam-pirenena.
"Mitady fomba famoronana foana izahay hanosehana ny valopy ary hametraka an'i Curaçao eo amin'ny sehatra manerantany," hoy i Pennicook. “Amin'ny alàlan'ny fiaramanidina tsy miato amin'ny American Airlines avy any Miami International, South Florida dia iray amin'ireo tsena ara-jeografika avo indrindra eto amintsika. Ny fanambadiana ny seho kanto vao misandratra miaraka amin'ny iray amin'ireo hetsika malaza indrindra ao Miami dia toa tena natoraly. ”
Teraka sy nihalehibe tany Curaçao i Van Beusekom dia iray amin'ireo mpanakanto marobe ao an-toerana voamarina fa niaina fiainana vaovao tao amin'ny distrikan'i Scharloo sy Pietermaai an'i Curaçao niaraka tamin'ny sary hosodoko feno habibiana nipoitra teny an-dalambe tao an-tanàna. Van Beusekom, miaraka amin'ny rahavaviny sy mpitantana ny tetik'asa Nicole, dia mitantana ny BLEND Creative Imaging, orinasa kanto mieritreritra sy kanto mpamorona sary mihetsika amin'ny sary sy sary mihetsika. Van Beusekom dia iray amin'ireo mpanorina ny Street Art Skalo, fikambanana iray izay ny iraka dia ny hanatsara ny faritr'i Scharloo ao Curaçao ary haneho ny talenta eo an-toerana amin'ilay nosy. Ny sombiny ao ambadiky ny Museum Maritime Curaçao, raim-pianakaviana iray hanjono iray andro, dia iray amin'ireo zava-kanto an-dalambe Instagrammed indrindra eto amin'ny nosy.
“Isan'andro dia mahatsiaro mahazo aingam-panahy avy amin'ireo mponin'i Curaçao aho, amin'ny lokony, sy ny hatsaran-tarehy voajanahary ao amin'ilay nosy, ary nahatsapa ho voatery haneho ireo lafiny ireo amin'ny zavakanto misy ahy aho,” hoy i Van Beusekom. “Ny hanana fotoana hamoronana sary hosodoko Curaçao sy hametrahana ny toerana itodiana amin'ny sehatra manerantany dia zavatra nofinofisiko fotsiny.”
Ny tetikasa Wynwood dia nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana Novambra ary naharitra tapa-bolana teo ho eo vao vita. "Tickle Me Curaçao" dia haseho mandritra ny Art Basel (5-8 desambra) ary mandroso hatramin'ny faran'ny volana Janoary.
Helsinki, Budapest ary Bucharest no toerana fitsangatsanganana Krismasy eropeana voalohany